Muuusig baa lagu madadaaliyaa eyda booliska Madrid - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka MADRID MUNICIPAL POLICE
Image caption Qaar ka mid ah eyda booliska Madrid
Booliska magaalo madaxda Spain, waxa ay ku rakibeen xeryaha lagu hayo eydooda qalab gaar ah oo muusig, kaas oo loogu talo galay in ay dhagaystaan eydu oo ku nastaan. Waxaana lagu rajo weyn yahay in qorshahan cusubi hoos u dhigi doono daalka iyo qulubka eyda la soo darsa.
Farsamadan cusub waxa maalintiiba dhawr goor muusigii hore ee Classical Music la yidhaa loogu shidaa eyda, waxaana habkan muusig ku dabiibka ah loo yaqaan "Mozart effect".
Laba iyo labaatan ey ayaa la shaqeeya booliska Madrid waxaanay ka hawl galaan qaybo kala duwan oo ay baadheyaal ka yihiin.
Maamulka magaalada Madrid ayaa sheegay in eyda daal badan iyo qulub la soo darso inta ay ku jiraan hawl maalmeedkooda. Qalabkan lagu rakibay xerada lagu hayaana waxa uu qayb ka yahay dib u habayn lagu wado xerada eyda.
Eyda booliska Madrid waxay ku takhasuseen urinta walxaha qarxa iyo maan dooriyaha, waxaanay sidoo kale u tabobaranyihiin in ay hawlaha gurmadka ka qayb galaan.
Daraasad la sameeyey sanadkii 2012-kii oo lagu daabacay majallada Journal of Veterinary Behaviour ayaa lagu ogaaday in dhegaysiga musiga nooca Classical Music uu hoos u dhigo qulubka eyda.
Rafael de la Gandara oo ah saajinka taliyaha u ah ururka eyda ku shaqeeya ayaa sheegay in dib u haybaynta lagu samaynayo xerada eydu ay gacan ka gaysan doonto hagaajinta kartida eydu ku qabtaan shaqadooda.
Waxaanu intaa ku daray in eydu u baahanyihiin nasiimo iyo in sidoo kale maskaxooda la cariyo si ay ugu foojignaadaan qaadashada amarrada marka loo baahdo in si degdeg ah loo hawl galiyo.
"Tusaale ahaan, mararka qaar kolka eygu baadhayo maan dooriye, dhulkuu qodaa taasina run ahaantii ma ah si ku haboon baadhista walxaha qarxa" ayuu yidhi de la Gandara.
Dib u habaynta lagu samaynayo xeryaha eyda waxa sidoo kale ka qayb ah mishiinada qaboojiyeya hawada marka qabow jirana diiriya, taas oo ujeedadu tahay in dhibaatooyinka cimilada laga ilaaliyo eyda.